मदिराले खायो ओखलढुंगाको मौलिकता ! – www.visionfm.org
ON AIRधार्मीक गितहरु
NEXTGood Morning Vision (राशिफल)
मदिराले खायो ओखलढुंगाको मौलिकता !
मदिराको विज्ञापनले ओखलढुंगाका बजारहरु कुरुप बन्दै
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १८, २०७५ समय: ११:३३:०९
एसबी जेरो- ओखलढुंगा
भुवन श्रेष्ठ- मानेभञ्ज्याङ
ओखलढुंगा- मादक पदार्थको अव्यवस्थित विज्ञापनले नगर तथा गाउँको सौन्दर्य माथि प्रहार गरेको छ । जिल्लाको बजार क्षेत्रको मौलिक पहिचान लाई मादक पदार्थको विज्ञापनका लागि राखिएको होडिङ्ग बोर्डहरुले ओझेलमा पारेका छन् ।
मदिराको विज्ञापनले ओखलढुंगाका बजारहरु कुरुप बनेका छन् । मदिरा कम्पनीहरुले विज्ञापनका लागि राखेका होडिङ्ग बोर्डहरुले आफ्नै पहिचान र मौलिकता भएको बजार क्षेत्रलाई कुरुप बनाएको हो ।
जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वार मानेभञ्ज्याङ गाउपालिकाको हर्कपुर देखि जिल्ला सदरमुकाम बजार र आसपासका क्षेत्रमा मदिराका बडेमान लाईट बोर्ड र होडिङ्ग बोर्डहरु देख्न राखिएका छन् । यसले जिल्लाको बास्ताविक सौन्दर्यमा नकरात्मक प्रहार गरेको छ ।
सामान्य होटल, किराना पसल देखि अधिकांश ठुला होटल तथा पसलहरुमा विभिन्न मदिरा कम्पनीहरुले विज्ञापनका लागि होडिङ्ग बोर्डहरु प्रसस्तै राखेका छन् । सानमिगेल, किङ्ग फिसर, टुबोर्ग, अर्ना लगायतका अन्य मदिराहरुको होडिङ्ग बोर्ड राखिएको छ । जिल्लाको मुख्य सडक आसपास मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्र भित्रको बजार क्षेत्रमा यस्ता होडिङ्ग बोर्डहरु धेरै छन् । मानेभञ्ज्याङ्गको हर्कपुर, हिलेपानी, थाक्ले, मानेभञ्ज्याङ्ग बजार क्षेत्र, बालेथामडाडाँ, केत्तुके बजार, नगरपालिकाको मिलन चोक, रमाईलोडाडाँ, जिविस टोल, भैरवटोल र रामबजार क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश होटल तथा किराना पसलहरुमा विभिन्न मदिरा कम्पनीहरुले होडिङ्ग बोर्डहरु राखेका हुन् ।
एउटै होटल तथा किराना पसलमा एक भन्दा बढी मदिरा कम्पनीले बोर्ड राखेका छन् । अन्य व्यवसाय भन्दा कम्पनीहरुको पहिलो प्राथामिकता होटलहरु परेको छन् । होटलका छत, छना, टेबल, कुर्सी, भित्ताहरु रक्सीको विज्ञापन गर्ने मुख्य थलो बनेको छ । कम्पनीले बोर्डको तीन भान मध्य एक भागमा व्यवसाय र प्रोप्राईटरको नाम राखेर बाँकी आफ्नो विज्ञापन गरेका छन् । होटल तथा पसलहरुको अगाडीको भागलाई मुख्य गरी विज्ञापनका लागि विभिन्न मदिरा कम्पनीले प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
व्यवसायीको अनुमती माग्दैनन्
अधिकांश होटल पसलहरुमा सञ्चालक संग अनुमती समेत नमागी होडिङ्ग बोर्ड राखिएको पाईएको छ । मानेभञ्ज्यांग–५ की हर्किमाया श्रेष्ठ व्यवसायी हुन् । उनको बालेथामडाँडामा राजेश एण्ड विराज होटल तथा किराना पसल छ । उनको घरमा सानमिगेल र किंगफिसर वियर कम्पनीले होडिङ्ग बोर्ड राखेका छन् । उनको भनाई अनुसार बिना अनुमती ति बोर्डहरु राखिएका हुन् । ‘पहिले नाम मात्र सोधेर गएका थिए, बोर्ड बनाएर ल्याएछन् ।’ उनी भन्छिन् ‘कतिले त उ पर बाटो बाटै नाम टिपेर लान्छन् अनि पछि बनाएर ल्याउछन् ।’
सिद्धिचरण नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै पार्वती श्रेष्ठको सामान्य होटल छ । होटलमा तिन ओटा टेबल छन् । टेबलमा मदिराको विज्ञापनको लेबल टासिएको छ । त्यो उनी आफैले टाँसेका होईनन् । न कि उनले कम्पनी संग माग गरेर टाँस्न लगाएकी हुन् । ‘कम्पनीका मान्छे आफैले टाँसेर गएका हुन् ।’ उनि भन्छिन् ‘टेबल, ¥याक, ढोकामा समेत टाँसेका छन्, मइले टाँस्न लगाएको होईन ।’ उनको होटलको टेबल, ¥याक, ढोकामा सानमिगेल वियरको विज्ञापन भएको पोष्टर टाँसिएको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालय नजिकै रहेको गंगा विजय स्टोर्स भएको घरको चारै पट्टि सानमिगेल वियरको बोर्ड छन् । एउटा लाईट बोर्ड र अरु सामान्य होडिङ्ग बोर्ड हुन् । यि चार वटा बोर्ड सानमिगेल वियरको मात्र हो । होटलका सञ्चालक ज्ञानबहादुर कटुवालका अनुसार ति बोर्डहरु उनि संगको अनुमति बिना राखिएका हुन् । ‘एउटा लाईट बोर्ड चाहि भए हुन्थ्यो भनेर वितरक संग कुरा गरेको हुँ ।’ उनि भन्छन् ‘तर अरु चाही मलाई नसोधी राखेका हुन् ।’ सोही होटलमा किंग फिसर वियरको पनी होडिङ्ग बोर्ड राखिएको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका–११ रमाईलो डाँडाका थगेन्द्रराज राई होटल व्यवसायी हुन् । उनको श्रीगञ्ज होटल एण्ड लज नामक होटल छ । उनको होलमा टुबोर्ग, सानमिगेल, किंग फिसर, अर्ना लगायतका मदिराको बोर्ड राखिएको छ । होटल व्यवसायि संघका अध्यक्ष समेत रहेका राईका अनुसार यति धेरै मदिरा कम्पनीका विज्ञापन उनले राख्न लगाएका होईनन् । विना अनुमति कम्पनी आफैले बोर्ड राखेर जाने गर्छन् । व्यवासयी संग अनुमति लिएरै होडिङ्ग बोर्ड राखिएको गोर्खा ब्रोरी प्रा.लीका जिल्ला प्रतिनिधी कैलाश केसिले बताएका छन् । स्थानिय निकायहरुमा अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था थाहा नभएकाले पालिकाहरु संग अनुमति नलिईएको उनको भनाई छ ।
ऐन कार्यन्वयन भएन, राजश्व गुम्यो
जिल्लाको सबै भन्दा बढि मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्रका बजारहरुमा मादक पदार्थको विज्ञापन तथा होडिङ्ग बोर्ड राखिएका छन् । यि दुबै तहबाट मदिरा उत्पादक कम्पनीले विज्ञापनका रुपमा लाईट बोर्ड, होडिङ्ग बोर्ड राख्न अनुमति लिएका छैनन् । मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाले कर सम्बन्धिको “आर्थिक ऐन २०७५” बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षकै सुरुमा ऐन बनेको भए पनी दुवै स्थानिय तहले प्रभावकारी कार्यन्वयन गराएको पाईदैन । सिद्धिचरण नगरपालिकाको स्वरुपनै विग्रिने गरि विभिन्न मदिराको होडिङ्ग बोर्ड राखिएको भए पनि नगर बेखबर जस्तै बनेको छ । नगरपालिकाले लिने विज्ञापन करको दर ऐनको दफा ६ को अनुसूचि–५ मा व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यन्वयनमा आएको छैन । नगरपालिकाले पादक पदार्थ र सूर्तिजन्य वस्तुहरुको होडिङ्ग बोर्ड, डि.पि.एस बोर्ड, ग्लो बोर्ड राख्न प्रति वर्ग फिट दर पटके रु.२० र बार्षिक रु.५० लाग्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । कानुन अनुसार कुनै पनि कम्पनीले विज्ञापनका बोर्ड राखेका छैनन् ।
नगरपालिकाका मेयेर मोहन कुमार श्रेष्ठका अनुसार लाईट बोर्ड, होडिङ्ग बोर्ड राख्न मदिरा कम्पनी तथा त्यसका प्रतिनिधीले नगरपालिका बाट अनुमति लिएका छैनन् । ‘होडिङ्ग बोर्ड राख्न सिद्धिचरण नगरपालिका बाट स्विकृती लिएका छैनन्, नगरको सौन्दर्य नै विगार्ने गरि राखिएको होडिङ्ग बोर्ड लाई बजार अनुगमन गरेर निन्त्रण गर्ने छौँ ।’ मेयेर श्रेष्ठले भने ‘अनुगमन गरेर करको दायरामा ल्याईने छ । साथै सम्बन्धित कम्पनिका व्यवसायि प्रतिनिधीहरुलाई नगरपालिकामा बोलाएर छलफल गरिने छ ।’ ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुदा लाखौ राजस्व गुमेको छ ।
मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिकाले मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन प्रतिवर्ग फिट रु.१००।– लाग्ने ऐन बनाएको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनको अनुसूचि ७ ‘ख’ मा यो व्यवस्था भएपनी कार्यन्वयनको पाटो फितलो छ । गाउँपालिका भित्र विभिन्न मदिरा कम्पनीहरुले विज्ञापनको होडिङ्ग बोर्ड राखेको भए पनी कुनैले पनी कार्यालयबाट अनुमति नलिएको प्रमुख मोतिराज राईले बताए । ‘कुनैले पनि अनुमति मागेका छैनन् ।’ उनले भने ‘हामिले दिएका पनि छैनौँ ।’ कार्यविधि अनुसार अनुगमन गरिने प्रमुख राईले बताए ।
आफ्नो व्यवसाय परिचयको लागि १५ स्क्वायर फिट सम्म एक थान बोर्ड व्यवसायीले आफ्नो पसल वा व्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडिको भागमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । एक भन्दा धेरै बोर्ड राख्नु परेमा अनुसूचि ७ मा व्यवस्था भए अनुसारको दर रेटमा सम्बन्धित व्यवसायीले विज्ञापन कर बापत बुझाउनु पर्ने मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिकाले ऐन पारित गरेको छ ।
होटल व्यवसायि संघ ओखलढुंगा र उद्योग वाणिज्यसंघ ओखलढुंगाको तथ्यांक अनुसार १ सय ५५ होटल र १ हजार ३ सय ५५ अन्य व्यवसाय जिल्लामा सञ्चालित छन् ।